/Blog/Gallery/Izinzuzo eziphezulu ze-15 Winstrol Okudingeka Uyazi Ngaphambi Kokuthenga i-Winstrol Online
Posted on 01 / 17 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Konke mayelana neWinstrol
I-1. Yini iWinstrol? I-2. UWinstrol usebenza kanjani?
I-3. Izinzuzo eziphezulu ze-15 Winstrol ku-Bodybuilding I-4. I-Winstrol Isilinganiso
I-5. I-Winstrol Isikhathi sokuphila I-6. Isikhathi sokuthola i-Winstrol
I-7. Winstrol Cycle I-8. I-Winstrol Post Cycle Treatment
I-9. Kuthatha isikhathi eside kangakanani ukubona imiphumela ye-Winstrol? I-10. I-Common Winstrol Side Side Effects
I-11. Indlela yokugwema i-Winstrol Side Effects I-12. Ukuqhathaniswa kwe-Winstrol
I-13. Indlela Yokuthenga Winstrol Online I-14. I-Winstrol Powder Recipe
Ingabe i-anabolic steroids into eqinisekile uma ufuna ukunciphisa isisindo somzimba wakho futhi ngesikhathi esifanayo ugcine ubukhulu bemisipha? Thola ukuthi kufanele yini ibhange nge-stanozolol (i-Winstrol) i-steroid, izinzuzo ezingaphezu kwamanye ama-steroid, nokuthi Thenga i-winstrol.
Uma ufuna ukushisa amafutha futhi ube nesisindo somzimba esiqinile, ungabhalisa ekuzivocavoca futhi wenze ezinye izinto zokusebenza ezihlanganisiwe. Nokho, lokhu kudinga ukuqeqeshwa nokuqeqeshwa okuvamile. Indlela kuphela eqinisekile yokuya ukuncipha emsimbeni ngokushesha, banokubekezela okukhulu, futhi bathole noma balondoloze isisindo somzimba ngokuthatha isandiso steroid.
Ngokungafani nezinye i-steroid ezinemiphumela emibi kakhulu kunezinzuzo, i-winstrol inezinzuzo eziningana kumsebenzisi. Enye into okumele ukwazi ukuthi ibuye isebenzise ezinye zokwelapha.
1. Yini iWinstrol?
Ngaphambi kokufika kuleli khasi, kungenzeka ukuthi ubuze imibuzo eminingana ephathelene nokuthi, "Iyini i-winstrol futhi yenzani?" Yebo, lesi sihloko sizoveza okungaphezu kwalokho owafuna ukwazi.
I-Winstrol noma i-Stanozolol yiyona i-synthetic steroids nazo zombili anabolic and properties androgenic. Ngendlela yayo eluhlaza, lesi sakhi samakhemikhali ephilayo sithwala i-CAS no. 10418-03-8. I-Stanozolol ivela ku-dihydrotestosterone (i-DHT). Inqubo yokwakheka ihilela ukuxosha i-3-keto-aldehyde ye-oxymetholone ne-hydrazine.
I-Winstrol itholakale njengomlomo noma imithi ejova. Isebenza ngokuqalisa amaprotheni kanye nokusheshisa ukukhula kwemisipha. Ngaphandle kwalokho, iningi labantu liyakuthatha ngesikhathi sokujikeleza ukuze kutholakale umzimba owuhlaza kodwa omzimba. Isidakamizwa asivunyelwe emazweni amaningi kufaka phakathi i-USA FDA ikhathaze njengento yesigaba III.
Naphezu kokuveza izakhiwo ze-anabolic, i-winstrol nayo inezinhlobo ezithile zokwelapha. Ngokwesibonelo, kungaphatha izifo ezisusa isisu, kushukumise ukukhiqizwa kwe-hemoglobin, nokuphathwa kwe-angioedema. Nakuba i-stanozolol itholakale kuphela ngaphansi kwesidakamizwa sangempela sedokotela, usengathola Winstrol ukudayiswa ezitolo eziningi ze-intanethi.
Lesi sidakamizwa si-anabolic kathathu uma kuqhathaniswa ne-testosterone. Ukuba i-steroid ye-C17-alkylated alkylated, i-stanazolol inokubunjwa okuyisakhiwo esiyingqayizivele ngenxa yokuguqulwa kwe-hormone ye-dihydrotestosterone. Ngenxa yalesi sizathu, into eyi-10x anabolic kune-androgenic.
Ukulinganiswa kokulinganisa 320 100
Isilinganiso se-Androgenic 30 100
U-Winstrol uqale waba khona ku-1959. I-Winthrop Labs yenze lokhu ngenhloso yokwelapha izimo ezihlukumezekayo eziphazamisa izifo. Amandla okugcina i-nitrogen yalesi sidakamizwa enza kube yinto efanele yokumiswa kwemisipha yokuchitha izimo. Nge-1962, sase isinqobile imvume ye-Food and Drug Administration (FDA).
Yini eyenza i-Winstrol idume ngukuphikisana kwama-doping okwakukhona phakathi ne-1980s yama-Olimpiki. Ngizochaza. Ezingqungqutheleni ze-1988, uBen Johnson wanqoba imbali yegolide lapho efika emncintiswaneni we-100M. Wabeka irekhodi elisha ngokushaya i-American Olympian evelele, uCarl Lewis.
Naphezu kokuba yi-sprinter, i-sprinter ye-world class, uJohnson wabhekwa ngenxa yokusebenzisa uStanzolol ukuthuthukisa ukusebenza kwakhe. Ngenxa yalokho, iziphathimandla zaqeda indondo yakhe futhi kamuva yammisa kuma-Olympics.
Emva kwalokhu i-anabolic steroid yabonakala iyasebenza, iningi labagijimi belandela i-doping it for sports. Kodwa-ke, uhulumeni wase-US wehla kanzima ekusetshenzisweni kwe-steroids. Ngenxa yalokho, iqinisa imithetho elawula ukukhiqizwa, ukusetshenziswa, nokuthengisa kwalokhu okufakwayo.
I-Winstrol Igama lomkhiqizo
Qaphela ukuthi uhlobo oluluhlaza lwalesi sidakamizwa lungumkhiqizo we-cristal off-white. Iningi labantu lithola Winstrol powder ukunambitheka ukuqina.
2. UWinstrol usebenza kanjani?
I-Winstrol iyi-steroid ye-heterocyclic enezinhlangothi eziqinile ezibophezelayo ezihambelana ne-androgen receptors. Ngeke nje kuhlanganiswe amaprotheni kodwa futhi kukhulise ukwakhiwa kwe-collagen. Isidakamizwa sisheshe siphumelele i-anabolism yamaprotheni ngenkathi ngenxa yalokho ishintshe imisebenzi yezinhlanzi.
Ihlisa izinga lama-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), ngakho-ke, kubangela ukwanda kwe-testosterone yamahhala. Ngemuva kwalokho, umzimba wakho uthatha izakhiwo ze-anabolic.
Imiphumela emibi kakhulu ye-anabolic steroid yizici ze-estrogenic. Kodwa-ke, i-winstrol ngeke isheshe ibe ne-estrogen. Isizathu sokuthi i-A-ring eyekele esikhundleni seqembu le-3-keto, inikeza lesi sidakamizwa steroid eyomile.
Ukuba khona kweqembu le-methyl esakhiweni salo kwandisa ukutholakala kwe-stanozolol emzimbeni. Imiphumela ye-winstrol izobonakala ngokushesha ezinsukwini ze-14.
3. Izinzuzo eziphezulu ze-15 Winstrol ku-Bodybuilding
Uma ufuna ukuzuza ngokuphumelelayo kusuka ku-winstrol, kufanele uyihlanganise nge-a Ukuzivocavoca okuqhubekayo umbuso kanye nokudla okunempilo. Njengoba umzimba wethu uhlukahluka ngokwemigomo yesenzo sezidakamizwa nokuphendula, ukulandela umshwalense nokugcina umjikelezo omfushane kuzokusindisa emiphumeleni emibi.
I-Winstrol inzuzo ye-1: Izingozi Zero ze-Estrogen Promotion
Okwenza uWinstrol avele phakathi kwazo zonke ezinye i-steroids ye-anabolic yiqiniso lokuthi alishintshi ku-estrogen. Kubasebenzisi besilisa, lokhu kuyisici esibaluleke kunazo zonke ongayibheka kumuthi osondeza umzimba.
Ake ngichaze. Uma usengaphakathi emzimbeni, i-steroid ijwayele ukuguqula ibe i-estrogen. Imiphumela emibi ye-estrogenic ngeke ibe mnandi ikakhulukazi uma kufanele uhambe ngezimbuzi zesifazane, okuyinto noma yiyiphi inhlangano yomphakathi ezoziqhenya ngayo.
Uma kukhona okuzokushiya ophazamisayo mayelana nezingozi zokungcola, khona-ke yi-winstrol vs anavar encwadini ejabulisayo. Lawa ma-steroids amabili awabonisi umphumela we-domino wokuguqulwa kwe-estrogen noma ukugcinwa kwamanzi.
I-Winstrol inzuzo ye-2: I-Muscle Gain
UWinstrol udlala indima ekukhuliseni i-anabolism yamaprotheni. Idala amangqamuzana omzimba ukuba akhiqize futhi agcine amaprotheni amaningi ngangokunokwenzeka, ngakho-ke, ukwandisa kokubili ubukhulu besisindo namandla. Ngenxa yokwanda kwezinqubo ze-metabolic, umzimba uveza i-adenotriphosphate eyengeziwe, eyithatha indima enkulu ekwakheni imisipha.
Gweba i-stanozolol ne-Deca steroid kanye nokusebenza okuyi-compound, futhi uzoba ne-winstrol yakho ngaphambi nangemva kwalokho imiphumela ihamba ngegciwane.
Izinzuzo ze-Winstrol 3: Amandla Nokukhuthazela
Noma yimuphi umqashi womzimba uzoqinisekisa futhi aqinisekise ukuthi i-steroid, eyandisa kuphela ubukhulu besisu ngaphandle kokukhulisa ukukhuthazela kwakho akusizi ngalutho.
Ngakho, i-stanozolol ithuthukisa kanjani amandla akho? Ake ngichaze. Isidakamizwa siqala ukukhiqizwa kwamaseli abomvu emzimbeni wakho. Njengoba lawa maseli anesibopho sokuthwala i-oksijeni, imisipha nayo ithola umoya okwanele ukukhuthazelela ukuvivinya umzimba isikhathi eside.
Ngenxa yamandla okuvimbela i-cortisol, i-winstrol izosheshisa inqubo yokutakula futhi ivikele ukucindezeleka noma ukucindezeleka. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abasebenzisi abahlanganyele emidlalweni yokuncintisana njengebhayisikili noma imidlalo yokugijima, ibhange kwi-steroids yokukhulisa ukusebenza kwabo.
Izinzuzo ze-Winstrol 4: I-Bulking Cycle
Kungenzeka ukuthi udokotela uzobeka i-winstrol iziguli ezithola kunzima ukuthola noma ukugcina isisindo esivamile. Nokho, lokhu akuyona iphuzu eliqondile engifuna ukulibeka kulo lonke.
Amantombazane ahlale elulekwa ukuba acwebe ama-anabolic steroids ngenxa yemiphumela emibi ye-androgenic. Ngakolunye uhlangothi, nansi eminye imininingwane emihle ngokulinganisela kobulili embonini yomzimba. Winstrol kwabesifazane uqinisekile ukuthuthukisa imisipha yakho ephikisayo ngaphandle kokuphikisana ngezinwele zomzimba ezandisiwe, izitho zangasese ezithintekayo, noma izinsimbi ezijulile zomculo.
Izinzuzo ze-Winstrol 5: Ingozi Ephansi Yezingxenyeni Zase Side Androgenic
I-Winstrol ingenye yezinto ezimbalwa ze-anabolic steroids ngezinga eliphansi le-androgenic. Ngakho-ke bobabili abasebenzisi besilisa nabesifazane abasencane amathuba okulahlekelwa izinwele noma izinwele.
Kodwa-ke, akusho ukuthi usuphephile ngokuphelele kulezi zithinta imiphumela ye-winstrol. Ngivumele ukuthi ngibe nokukhanya lapha. Abanye abantu banesifo sezakhi zofuzo ezingasetshenziswa kalula ezindaweni eziphakeme ze-androgenic ngisho nangokwehliswa kancane. Uma ungawi ngaphansi kwalesi sigaba, umuthi uzokuvulela kahle.
Izinzuzo ze-Winstrol 6: Ukubukeka Okubukeka (Ukunquma Umjikelezo)
Cishe wonke ama-anabolic steroids azokuletha umphumela wokubhukuda kangangokuthi amaqembu ezinsimba nawo aphethwe. Uma ungumgqugquzeli womzimba noma umdlali wezokuncintisana, ukubukeka okuningi kungaphazamisa ukusebenza kwakho emncintiswaneni.
Into engcono kakhulu nge-winstrol yukuthi kusiza umsebenzisi ukuthi alondoloze imisipha emine kuphela. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi lesi sidakamizwa sisetshenziswa esigabeni sokusika ukunciphisa amafutha omzimba ngesikhathi somjikelezo. I-winstrol yeClub ne-Primobolan futhi uzobukeka kanzima ngokubonakala kwe-vascular.
Izinzuzo ze-Winstrol 7: Akukho ukugcinwa kwamanzi
I-hormone ye-Androgenic ekhona kwi-steroids yama-anabolic iyimbangela eyinhloko yokugcinwa kwe-sodium, ngakho-ke, ukuthambekela komzimba ukugcina amanzi. Uma i-estrogenic engaphezulu, izidakamizwa zikhona, umzimba wakho uzowugcina ngaphezulu. Ngaphandle kwalokho, lo mphumela ohlangothini uhlanganiswe ekukhunjweni kanye nomfutho wegazi ophezulu.
Kuze kube manje, kunezinhlobo ezintathu kuphela ze-steroid ezinezakhiwo ezihamba phambili. Lezi yi-stanozolol, anavar, ne-trenbolone. Uma ubungalinganisa izinzuzo ze Winstrol vs anavar, uzobona ukuthi bobabili banezimo ezikhethekile zokwakha umzimba. Noma kunjalo, uWinny uzokusiza uthole imisipha eminingi kunezinye ezintathu ze-steroids.
Izinzuzo ze-Winstrol 8: Ukusetshenziswa kokwelapha
Ubuchopho ngemuva kukaWinstrol bakhetha i-steroid ngenhloso yokunakekela izimo zokuchitha imisipha. Ukusetshenziswa okuyisisekelo kokwelashwa kwe-stanozolol kusekwelapha i-angioedema, efaka ukuvuvukala kobuso, umphimbo, noma izitho zangasese.
Ezinye izimo ezizokubeka ngaphansi kwemithi ye-winstrol zifaka izilonda ze-decubitus, i-anemia ye-aplastic, i-osteoporosis, yehle umsebenzi we-fibrinolytic, noma ukwehluleka kokukhula. Ngaphandle kwalokho, i-steroid iyisisombululo sokugcina sezinkinga ezithile, okungalawulwa kuphela ngokuguqula izinqubo zemigomo.
Ngikhulume ukuthi winstrol kabili njenge-steroid yesintu nesilwane? Manje usuyazi! Naphezu kokuthuthukisa izilwane ezibandakanya emincintiswaneni efana nokugijima kwamahhashi, uWinny uyisidakamizwa se-vet. Ivuselela ukukhula kwamathole futhi ilawula ukuphazamiseka okunomsoco kakhulu emakati nasezinja.
Izinzuzo ze-Winstrol 9: Iphelele ngeSteroid Stacking
Nakuba kunehlukahluka okuhlukile i-anabolic steroids, awukwazi ukuwafaka njenge candy. I-stteroid efanele ye-steroid iqinisekisa imiphumela emihle kakhulu. Kodwa-ke, ukuhlupheka kuyangena uma kufanele ubone ukuthi yiziphi izixube ezithinta kahle nomunye, nokuthi ungcono kanjani ukuxuba nokuzifanisa.
Ngivumele ngichaze ukuthi kungani kufanele ubeke uWinstrol nezinye izidakamizwa.
Iningi lama-anabolic steroids liyobopha kwi-Sex Hormone-Binding Globulin yomzimba. Ukubambisana okuphezulu kwe-SHBG kungathobeli isenzo se-steroid emzimbeni womsebenzisi, ngakho-ke, ukwenza isidakamizwa asize.
Icala lihlukile ne-winstrol ngoba lihlehlisa amazinga e-SHBG emzimbeni. Ngakho-ke, ungayifaka nge-steroid eziningana futhi usathola imisipha enesisindo kanye nesimo esihle semisipha. Inhlanganisela yethu efanelekayo yeWinstrol ihlanganisa i-trenbolone, i-cardarine, i-Primobolan, i-andarine, i-anavar, noma i-masteron.
I-Testosterone nayo inhle kakhulu yokufaka imishini kodwa yenza isiqiniseko sokuthatha amanani aphansi ukuze ungaqedi imiphumela yokunambitheka.
Izinzuzo ze-Winstrol 10: Ukutholakala kwe-High Bioavailability
Ukutholakala kalula kwe-steroid kuzohlale kunquma amandla ayo. Ku-stanozolol, kuneqembu le-methyl esakhiweni salo elenza lingatholakali kuze kube ngamahora we-24. Lesi sidakamizwa esithuthukisa imisipha singadlula esibindi ngaphandle kokudiliza.
Izinzuzo ze-Winstrol 11: Izindlela Eziningi Zokuphatha
Ungathatha i-winstrol ngomlomo noma nge-injection ye-intramuscular. Le yangaphambili iphathwa kabili ngosuku kusukela i-half-life is cishe amahora ayisishiyagalolunye. Ngakolunye uhlangothi, lesi sigaba sinomkhawulo wokuphila, ngakho-ke, sithathwe kanye ngosuku.
Uma ngabe sihamba ngembiko yabathengi, abasebenzisi abaningi bakholelwa ukuthi ifomu lokujova lenza imiphumela emihle kakhulu. Kodwa-ke, into eyodwa eyobenza baqede ukuphikisana ngumjovo obuhlungu, ophikelela ngisho nangemva kokuphatha.
Ingabe ufuna ukudlula umphumela we-side toxicity effect? Khona-ke kufanele ujove esikhundleni sokugwinya iphilisi. Ngomjovo, i-winstrol izofaka uhlelo lokujikeleza ngokuqondile ngaphandle kokudlulisa isibindi.
Izinzuzo ze-Winstrol 12: Zimbalwa Imiphumela Ezingezansi
Njenganoma imuphi omunye umuthi, i-winstrol inemiphumela emibi futhi. Kodwa-ke, uma unamathela kumthamo we-Winstrol ophakanyisiwe ngenkathi ugcina umjikelezo wesikhathi esifushane, uzobe uthola kancane imiphumela emibi.
Izakhiwo ezikhungathekisa kakhulu abantu abazizondayo yizo ezibangelwa amahomoni a-androgenic ne-estrogenic. Kulesi simo, i-winstrol inezinga elilinganiselwe le-androgenic futhi alikwazi ukuguqula i-estrogen. Ngakho, uphephile!
Izinzuzo ze-Winstrol 13: Okuthandekayo Kwabesifazane
Iningi lama-anabolic steroids liphikisana nabesifazane ngenxa yezinga eliphezulu lokuphendula kwe-androgenic. Amazinga aphakeme we-androgen azobangela ukulahlekelwa kwezinwele kubantu, ukuzwakala kwezwi phakathi kwabesifazane, kanye neminye imiphumela emibi engayikuziqhenya ngayo.
Icala lihlukile nge-stanozolol ngoba liphakathi kwama-steroids ambalwa okulinganiselwe ukuthi i-androgenic isilinganiso. Ukuqhathanisa okusheshayo phakathi kwama-androgen kanye nama-anabolic ratios alo muthi kanye ne-testosterone izoba cishe ku-10.7: 1 no-1: 1, ngokulandelanayo. Ngalezi zimiso, manje uyaqonda ukuthi kungani usengabhange ku-winstrol kwabesifazane ngaphandle kokuphuma njengoJay Cutler.
Izinzuzo ze-Winstrol 14: I-Animal Steroid
Ezilwaneni zezilwane, i-stanozolol (i-Winstrol / winny) iyaziqhenya ngokusetshenziswa kwezinyathelo eziningi zokwelashwa kanye nokuba yisterodi e-anabolic. Ekuqaleni, ifomu lokujova lalihloselwe kuphela izilwane. Abanye abantu bangasebenzisa lesi sidakamizwa uma beqeda ukugijima kwamahhashi noma omunye umncintiswano wesilwane esifanele.
Izinzuzo ze-Winstrol 15: Ukusheshisa nobukhulu
Cishe uke wazibuza ukuthi kungani umgijimi onesizotha angahamba nge-steroid, okuzokwenza kuphela imisipha bese ushiye umphumela wokubhukuda. Yebo, i-winstrol ngeke ikhulise amandla akho kuphela kodwa futhi iyakusiza ukukhulisa amandla akho kanye nokusheshisa ngokujwayelekile. Phela, abagijimi bayokhathalela ukusebenza kwabo kunokuba basuke besilisa.
Uma sizoxoxa ngakho konke izinzuzo ze-winstrol, Ngicabanga ukuthi sizodinga lonke incwadi. Ezinye izinzuzo zihlanganisa ukukhulisa isibindi samathambo, ukuqinisa ama-tendon kanye nemigqa, nokukhiqiza ukubonakala kanzima kodwa okuyi-vascular.
4. I-Winstrol Isilinganiso
I-Winstrol ikunika ukuhlukahluka kokukhetha phakathi komthamo womlomo noma wokujova. Zombili zifaka i-stanozolol njenge-hormone esebenzayo ene-C17-aa steroids. Isikhathi esifanele sokuphatha lesi sidakamizwa singaphambi noma ngesikhathi sokudla.
Ngomlomo, i-stanozolol itholakala kwifomu yethebulethi noma yepilisi. Njengoba i-winstrol yokuphila isigamu ifinyelela emahoreni ayisishiyagalolunye, kuzodingeka uyithathe kabili ngosuku ukuze ugcine ukutholakala kwayo.
Umthamo womlomo uhluka phakathi kwe-40 no-80mg. I-Winstrol yesilinganiso esilinganiselwe sibhekene nezici ezimbalwa ezifana nesipiliyoni somuntu nge-steroids, izinga lokubekezela, nokuthi yini ofuna ukuyifinyelela. Qaphela ukuthi, isibindi sakho esimangalisa ngesilinganiso esiphezulu sizokuphazamisa imiphumela emibi engavumeleki.
Ezimweni eziningi, iWinstrol ukudayiswa iyatholakala kwiphakethe lama-tablet we-10mg noma i-50mg. Abasebenzisi besilisa bangaya emkhakheni owodwa kodwa abesifazane kufanele babe sezingeni eliphansi.
Abesifazane okwenzeka ukuthenga isilinganiso esiphezulu, akufanele baphumele ngaphandle ngoba bangakwazi ukuhlukanisa iphilisi ngezicucu ezintathu futhi badle ngo-12.5mg / ngosuku. Ngakolunye uhlangothi, amadoda Thenga i-Winstrol namaphilisi angu-10mg namanje ephephile ukusebenzisa ama-capsules amahlanu ngosuku.
Ngokulingana noWinny etholakala kwifomu yethebhulethi, imikhiqizo embalwa iphinda ikhiqize lesi sidakamizwa esimweni esinamandla. Uketshezi luyisibindi futhi lunomdla oqinile. Kodwa-ke, ungakwazi ukunciphisa ukunambitheka ngokuthatha ijusi noma isiphuzo okukhethile.
Uma ukhetha ukuthatha izijovo, i-winstrol eyodwa yokwakha umzimba izokugcina amahora we-24 alandelayo. Umthamo uwela phakathi kwe-50 no-100mg kuye ngokuthi unomzimba womzimba, umsebenzisi ophakathi, noma uqala.
Ungakwazi ukuzijoca ohlangothini olungenalutho, ingalo engenhla, noma amathanga.
5. I-Winstrol Isikhathi sokuphila
I-Winstrol isigamu sokuphila seminwe ngokulinganisa uhlobo lomthamo othathayo. Isibonelo, umthamo womlomo unokutholakala kwamahora we-8-9. Ngomjovo, isikhathi silingana namahora we-24.
6. Isikhathi sokuthola i-Winstrol
Uma ukuhlolwa okuphikisana nokuqeda i-doping kwenziwa, isikhathi sokuthola amasonto amathathu nesishiyagalombili, ngokulandelana. Lezi zinamba zibonisa ukuthi i-winstrol ngeke izuzise kubadlali abasebenzayo ngoba amathrekhi wezidakamizwa aphelelwa amaviki angu-2 - 4 ngemva kokuqedela umjikelezo.
Umjikelezo we-winstrol ojwayelekile ungapheli amasonto ayisithupha. Kodwa-ke, abantu abanolwazi lokusebenzisa i-steroids bangasithatha amasonto ayisishiyagalombili. Kunengqondo ukuthi unciphisa umthamo wamasonto amabili ngaphambi kokuphela kwesigaba. Nakuba lesi sidakamizwa sishiya igumbi le-steroid stacking, akufanele ulisebenzise eceleni kwe-C17-aa steroids.
Nakuba abesifazane kufanele balondoloze umthamo wansuku zonke ka-10mg / usuku, izici zomzimba zesilisa kufanele zithathe isilinganiso esingu-50mg / ngosuku. Noma kunjalo, abasebenzisi pro bangenza 100mg ngosuku kuphela emavikini amabili edlule umjikelezo.
8. Winstrol I-post Cycle Treatment
Ekupheleni komjikelezo we-winstrol, kufanele uthola olunye ukwelashwa ukuze unciphise ukudangala nokucindezelwa kwe-hormone. Kungakhathaliseki ukuthi uqala ukuqala amazinga ajwayelekile we-testosterone noma uqede ukulahlekelwa imisipha oyitholile phakathi kwamasonto ayisithupha. Amazinga aphansi e-testosterone azokucindezela futhi uzizwe ebuthakathaka.
9. Kuthatha isikhathi eside kangakanani ukubona imiphumela ye-Winstrol?
I-Stanozolol iqala ukusebenza ngokushesha uma ufaka umjikelezo omusha. Noma kunjalo, izinguquko ezibonakalayo zenzeka phakathi nesonto lesibili. Ngezinsuku ezingu-14, qiniseka ukuhamba kude nesibuko ngokumomotheka kusukela ku- winstrol ngaphambi nangemva izithombe zizokugubha.
Khumbula ukuthi lokhu kuthuthukiswa kwemisipha akuqinisekisi imiphumela emihle kubo bonke abasebenzisi. Ukuze uthole umzimba oqothukile, we-muscular, futhi okhanyekayo, kuzodingeka usebenze ekudleni kwakho, ukudla okunomsoco, kanye nombuso wokuzivocavoca.
Nakhu ukuphazamiseka ngalokho okumele ukwenze ngaphakathi komjikelezo wamaviki we-6 - 8;
1 Ayikho izinguquko ezibonakalayo kodwa umzimba uzolahlekelwa isisindo samanzi esingeziwe
2 Ukulahleka okunamafutha okuphawulekayo ngamandla ethuthukisiwe
4 Ukwanda kwe-vascularity namandla amakhulu
6 Ukubukeka kahle kwemisipha nge-tummy encane nokusebenza okuthuthukisiwe
Hlola amathiphu athile wokuthatha indlela yokujabulela imiphumela ye-winstrol yomzimba;
Yiba njalo futhi uhlale njalo ekusebenziseni kwakho ukuthola inzuzo yemisipha yemvelo
Dlulela phezulu ama-burgers kaMcDonalds kanye nalawo adle ama-sweet, ashukela noma ama-fatty
Hlala utshwala ngaphandle uma usuphemeni wokuzibulala wokulimaza unomphela isibindi sakho
Kwamangalisa isibindi sakho ngamaningi amaningi amanzi ngaso sonke isikhathi
Thatha ukudla okunevithamini C efana nezithelo ze-citrus
Faka phakathi ukuzivocavoca kwe-cardio embusweni wakho wokuzivocavoca
Hamba ubungane nemifino eluhlaza
I-10. I-Common Winstrol Side Side Effects
Imiphumela yokusebenzisa i-Winstrol ihlukahluka komuntu oyedwa kuya kwesinye ngenxa yemibono ye-hormonal. Ukubhekana nemiphumela emibi ye-anabolic steroids kuqinisekisiwe njengokufa, kodwa unganciphisa izingozi ngokungadluli umthamo bese uhamba umjikelezo omfushane.
Ukunciphisa i-Testosterone ikakhulukazi ngesikhathi sesigaba sokujikeleza
Ukwanda kwezinga le-cholesterol embi, ngakho-ke, ukugxeka izingozi zemivimbo noma ukuhlasela kwenhliziyo
Ubuhlungu obuhlangene ngenxa yokomisa okubangelwa amazinga aphansi we-synovial fluid
Ukucindezeleka ngemva komjikelezo
Imiphumela emfushane, ehlala cishe amasonto amane
Ukusetshenziswa kwemvelo phakathi kwabasebenzisi besifazane
Ukuvuthwa kwe-epiphyseal kusengaphambili
11. Indlela yokugwema i-Winstrol Side Effects
Sebenzisa uketshezi lwe-cholesterol
Ngisho noma inhliziyo yakho iphilile, qiniseka ukwenza ezinye zokuhlola njalo. Isinyathelo esisodwa esibalulekile ukufaka amaminerali nge-HDL ye-cholesterol enhle ekudleni kwakho. Isibonelo, amafutha wezinhlanzi aphakathi kwamaphilisi afinyeleleka kakhulu ekulawuleni le mpumelelo ye side winstrol.
Thuthukisa amazinga wakho we-testosterone
Amazinga aphansi e-testosterone ayenzeka ngesikhathi sokujikeleza emva kokukhiqizwa kwemvelo kwaleli hormone kuvaliwe. Indlela eqinisekile yokubhekana nale mphumela ohlangothini iwukufaka isandiso se-testosterone ngaphakathi kwamasonto amabili edlule womjikelezo.
Izithako ezifana ne-TUDCA, i-Liv-52, i-NAC, noma i-milk thistle izovikela isibindi sakho.
Ukwelashwa komjikelezo weposi (PCT)
Ngokuvamile, i-androgenic steroids nazo zonke ezinye i-hormone ezisebenzayo zizothatha amaviki e-2 - 3 ukuze asuse ohlelweni lwakho. Phakathi nalesi sikhathi, kufanele uhambe ngokusebenzisa ukwelapha izidakamizwa ukucima futhi uzinze izinga lakho le-hormonal. Isibonelo, ukusebenzisa i-Nolvadex noma i-clomid kuzobuyisela ukukhiqizwa kwe-testosterone.
Ubude be-PCT buhluka phakathi kwamasonto amabili kuya kwamane.
12. Ukuqhathaniswa kwe-Winstrol
Ucwaningo lubonisa ukuthi i-steroids ingase iholele ekufweni kwe-fetus masculinization
Izisulu ze-prostate ne-breast carcinomas
Abantu abane-hypersensitivity kuya kuma-steroids
Izingane kanye nentsha
13. Indlela Thenga i-Winstrol Online
Iningi lamazwe livimbele ukusetshenziswa kwe-anabolic steroids. Ngakho-ke, kunzima ukuthola i-winstrol ukudayiswa ngaphandle kokuthi uthuthele kwamanye amazwe abhalise ukusetshenziswa kwayo. Isibonelo, e-US, e-Australia, e-UK nase-Canada, kuphikisana nomthetho ukuba ube nomnikazi, usebenzise, ​​noma usakaze noma iyiphi i-steroid. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sivumelekile kuphela ngesigwebo esivumelekile esivela kudokotela.
Ukuthenga kwe-Winstrol Legal
Ngenxa yemingcele, i-winstrol ingatholakala kuphela izimakethe ezimnyama. Ngezimakethe ezimakethe ezingaphansi, ungathola lokho okufunayo kepha kukhona amathuba amancane okuthola imikhiqizo yangempela.
Thatha, isibonelo, ifomu lokujova likaWinny lisesimweni esinamandla. Ngaphandle kokuthi kukhishwe endaweni ehlanzekile futhi engenayo, isixazululo kungenzeka sibe nama-germs kanye nezifo. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele wenze isinyathelo sokuthola ubunikazi obusemthethweni.
Ngaphandle kwalokho, ukuhlola kwezinye izitolo ze-inthanethi kungaba umqondo omuhle kakhulu.
Thenga i-Winstrol Online
Indlela kuphela eqinisekile yokuthenga i-stanozolol yezinga eliphezulu lesintu ihamba nge-intanethi yezitolo. Kungenzeka uye waya ukuyothenga izidakamizwa kwezinye izifundazwe ezikhathalela kancane mayelana nokuvinjelwa kwe-steroid, kodwa lokhu kubonakala kuyinkimbinkimbi. EMexico, isibonelo, imithetho elawula ukusetshenziswa kwama-anabolic steroids inomakhelwane.
14. I-Winstrol Powder Recipe
I-40ml @ 25mg / ml I-100ml @ 50mg / ml
Ubufakazi be-190 Ubuthi Utshwala 31.2ml -
I-PEG 300 7.5ml -
I-Polysorbate 80 - 3ml (3%)
Amanzi acwecwe - 62.5ml
Ukuphuza ngokweqile - 3ml (3%)
McMullin, GM., Smith, C., Watkin, GT., Scurr, JH. Ukuphumelela kokuthuthukiswa kwe-Fibrinolytic ne-Stanozolol ekuPhileni kwe-Insufficient ye-Venous, I-Australian ne-New Zealand Journal of Surgery, Ngo-Ephreli 1991.
UKicman, AT, Pharmacology ye-Anabolic Steroids, I-British Journal ye-Pharmacology, I-PMC 2439524, i-Online, i-2018
Falanga, V., Greenberg, AS, Zhou, L., et al., Ukukhuthazwa kwe-Collagen Synthesis yi-Anabolic Steroid Stanozolol, Izihloko ze-NCBI, Ku-intanethi, ngo-Disemba 1998
Ama-Bates, i-PC, i-Millward, i-DJ, i-Chew, i-LF, Imiphumela ye-Steroid Stabozolo ye-Anabolic Stanezolol ekukhuleni naseProtheni Metabolism ku-Rat, Izincwadi Zokushicilelwa, Ku-Inthanethi, ngo-September 1987
Indlela Yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe Yokuxuba I-Trenbolone Inanthate Powder 2019
Izibuyekezo ze-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol) I-Raw Proviron (i-Mesterolone) ekwakheni umzimba, isilinganiso, nomjikelezo